Chii chinonzi Infographic? Ndezvipi Zvakanakira An Infographic Strategy?
Wednesday, April 6, 2022 China, April 7, 2022 Douglas Karr
Sezvo iwe uchipenengura pasocial media kana mawebhusaiti, iwe unowanzo svika pane yakanyatso gadzirwa ruzivo ruzivo runopa tarisiro yemusoro wenyaya kana kuputsa matani edata kuita inoyevedza, imwe graphic, yakanyudzwa muchinyorwa. Chokwadi ndechekuti… vateveri, vaoni, uye vaverengi vanovada. Tsanangudzo ye infographic ndeiyi ... Chii Chinonzi Infographic? Infographics inoratidzira inomiririra yeruzivo, data, kana ruzivo rwakatarisirwa kuratidza
SEO Strategies: Maitiro Ekuwana Bhizinesi Rako Chinzvimbo MuOrganic Kutsvaga muna 2022?
Muvhuro, March 28, 2022 Muvhuro, March 28, 2022 Douglas Karr
Tiri kushanda nemutengi izvozvi ane bhizinesi idzva, mhando nyowani, domain nyowani, uye itsva ecommerce webhusaiti muindasitiri ine makwikwi. Kana iwe uchinzwisisa kuti vatengi uye injini dzekutsvaga dzinoshanda sei, unonzwisisa kuti iri harisi gomo riri nyore kukwira. Brands nemadomasi ane nhoroondo refu yechiremera pane mamwe mazwi akakosha ane nguva iri nyore kuchengetedza uye kunyange kukura organic chinzvimbo. Kunzwisisa SEO muna 2022 Imwe